के हाे टन्सिल ? टन्सिलबाट पीडित हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् घरायसी औषधि « गोर्खाली खबर डटकम
यो मुख्यत: भाइरस वा ब्याक्टेरियाको संक्रमणले गर्दा हुन्छ । भाइरसले गर्दा हुने टन्सिलाइटिसमा लाक्षणिकबाहेक कुनै खास उपचार आवश्यक नरहेको अाैँल्याउँदै डा. श्रीवास्तव भन्छन्, ‘ब्याक्टेरियाले गर्दा संक्रमण भएको भए एन्टिबायोटिकको माध्यमले उपचार गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन सक्छ ।’
भाइरसले हुने यो समस्या ५–६ दिनसम्म रहन्छ । ब्याक्टेरियाले गर्दा हुने टन्सिलाइटिस ८–१० दिनसम्म लम्बिन सक्ने डा. श्रीवास्तव बताउँछन् । बालबालिका र वयस्कमा टन्सिलाइटिसको लक्षण उस्तै हुन्छ । एक पटक टन्सिलाइटिस भएपछि पुन: ६ महिनामा हुनु सामान्य नै हो । तर यदि वर्षमा ५ पटक वा योभन्दा बढी यो समस्या देखियो भने यसलाई ‘क्रोनिक/पुरानो’ समस्या ठानेर शल्यक्रिया गर्ने सुझावसमेत दिइन्छ ।
टोन्सिल्याक्टोमी नामक शल्यक्रियाको माध्यमले टन्सिललाई झिक्नु कतिपय समय आवश्यक भए पनि यो गराउनुभन्दा अघि दुई तीन जना विशेषज्ञको सल्लाह लिनु राम्रो मानिन्छ । विशेषज्ञ चिकित्सकको सल्लाहमा अन्य विकल्प नहुँदा बारम्बार यो समस्याले दु:ख दिन थाले मात्र टन्सिलको शल्यक्रिया गरिन्छ ।
अर्थात्, बारम्बार टन्सिलाइटिस हुनु भनेको टन्सिल नै अति कमजोर हुनु हो, त्यसैले यसले शरीरको रक्षा गर्न सकिरहेको हँुदैन । यस्तो अवस्थामा टन्सिलले ब्याक्टेरियालाई आफूभित्र लुकाएर राख्ने काम मात्र गर्छ । टन्सिलाइटिसको समस्या हुने अधिकांशले पसलेसँग सोधेर औषधि सेवन गर्ने तथ्य औंल्याउँदै डा. श्रीवास्तव सचेत गराउँछन्, ‘तपाईंलाई एन्टिबायोटिक आवश्यक छ वा छैन, वा कस्तो लाक्षणिक उपचार चाहिन्छ भन्ने निर्णय चिकित्सकलाई गर्न दिनु नै बुद्घिमानी हो ।’
हाम्रो मुखभित्र घाँटीका दुवैतर्फ देखिने बदाम आकारको अंग नै टन्सिल हो । टन्सिल लिम्फेटिक प्रणालीको एउटा खण्ड हो । यो प्रणालीले संक्रमणलाई हटाएर शरीरको तरल पदार्थलाई सन्तुलनमा राख्छ । यसैले टन्सिललाई घाँटीको द्वारपालसमेत भन्ने गरिन्छ । टन्सिलले हामीलाई मुख र नाकबाट आउने कुनै पनि रोगाणुहरूलाई शरीर भित्र जान दिँदैन । अर्थात्, बाहिरी संक्रमणबाट जोगाउँछ ।
यदि हाम्रो टन्सिल बलियो छ भने यसले हाम्रो शरीरमा रोगलाई जानबाट रोक्नुको साथै आफू पनि रोग वा संक्रमणबाट बच्छ । यो संक्रमण ब्याक्टेरिया वा भाइरसले गर्दा हुन्छ । तर यो ढुसी र परजीवीले गर्दा पनि हुन सक्छ । अर्थात्, टन्सिल सुन्निनु नै टन्सिलाइटिस हो। यसअन्तर्गत कहिलेकाहीं घाँटीको ग्रन्थी पनि सुन्निन्छ ।
टन्सिल एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्ने रोग होइन । तर टन्सिलाइटिस उत्पन्न गर्ने भाइरस र ब्याक्टेरिया एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्न सक्छ । खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा टन्सिलाइटिस उत्पन्न गर्ने भाइरस वा ब्याक्टेरिया संक्रमित व्यक्तिबाट स्वस्थ व्यक्तिको शरीरमा प्रवेश गर्न सक्छ । यसैले बालबालिकालाई संक्रमणबाट जोगाउन टन्सिलाइटिस वा घाँटीको दुखाइ भएकाहरूको सम्पर्कमा राख्नु हुँदैन । निरन्तर साबुनपानीले हात धुने गर्दा यो संक्रमणबाट बँच्न सकिन्छ ।
-घाँटीको ग्रन्थी सुन्निनु
-टन्सिल रातो देखिनु
-टन्सिलमा सेतो वा पहेँलो तह देखिनु
-खाना/थुक निल्दा अप्ठयारो हुनु